Panasonic က Axial စိတျအပိုငျး INSERT စက် AV131 Lead China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:Panasonic ကခဲအစိတ်အပိုင်း INSERT စက်,စိတျအပိုငျး INSERT စက်ကိုပို့ဆောငျ,Panasonic က INSERT စက် AV131
Home > ထုတ်ကုန်များ > Panasonic က INSERT စက် > Panasonic က Axial စိတျအပိုငျး INSERT စက် AV131 Lead
Panasonic က Axial စိတျအပိုငျး INSERT စက် AV131 Lead
မော်ဒယ်နံပါတ်။: NM-EJA2A, NM-EJ3A
အဆိုပါ AV131 မြင့်မားတဲ့စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်များကို 0,12့/ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအလိမ္မာအချိန်တွင်မြန်နှုန်းမြင့်သွင်းနိုင်စွမ်းတဲ့ VCD ကို axial ခဲအစိတ်အပိုင်းသွင်းစက်ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးစုံသွင်းအားစု (120 သွင်းအားစု) နှင့်နှစ်ဦးကိုသီးခြားထောက်ပံ့ရေးခွင့်ပြုဒေါင်လိုက်လမ်းခွဲ၏မွေးစားအတူ စစ်ဆင်ရေးနှုန်းကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ယူနစ်, အ AV131 ကိုအလွန်စဉ်ဆက်မပြတ်မောင်းသူမဲ့စစ်ဆင်ရေးမှပံ့ပိုးများအတွက်ကတိပေးထားပါသည်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါလုပ်နိုင်သောရရှိနိုင် Jumper wire ကိုသွင်းတဲ့ function အတွက်မပါဘဲ Jumper ဝါယာကြိုးများ၏သွင်းနိုင်ပါတယ် စွန့်ပစ်ဖယ်ရှားဒါပေမယ့်လည်းအလွန်အမင်းအကျိုးရှိစွာနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုတ်လုပ်မှုသဘောပေါက်သာရာတိပ်များအတွက်လိုအပ်ပါတယ်။
0,12့/ အစိတ်အပိုင်းမှာ high-speed သွင်းသိသိသာသာကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်ကောင်းမွန်။
high-speed XY ဇယား
ပိုမိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်း XY စားပွဲပေါ်မှာ။
လေးဦးတည်ဘို့ insertion အလိမ္မာအချိန်
(0, 90, 180 နှင့် 270 ဒီဂရီ)
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးသွင်းယူနစ်နှင့်တိုက်ရိုက် drive ကို
ကျောက်ပြားနှစ်ပြားသို့ကွဲကွာအပိုင်းထောက်ပံ့ရေးယူနစ်အတွက်ထောက်ပံ့ရေးစစ်ဆင်ရေး mode ကိုအညီရွေးချယ်ခွင့်ပြု
အရှင်စစ်ဆင်ရေးနှုန်းကိုတိုးတက်အောင်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကို။ (5 Modes သာရရှိနိုင်ပါသည်။ )
အဆိုပါကျပန်း-access ကို system ကိုသွင်းအမှားအယွင်းများရုံခလုတ် operating နေဖြင့်အလျင်အမြန်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ခံရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
နောက်ပြန်လှည်ခဲရှုး (fixed ခြမ်း)
အဆိုပါသွင်း guide နှင့် pusher
ထို့အပြင် carbide ပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းတော်
မြို့ပတ်ရထား Arc Flat Cable ကို
ဦးခေါင်းနှင့်ပေလည်ပတ်ယူနစ်အတွက်ဝါယာကြိုးတစ်ပိုရှည်အသက်သည်မြို့ပတ်ရထားကို arc ပြားချပ်ချပ် cable ကိုကမ်းလှမ်းမှုချမှတ်
အဆိုပါတိပ်ခွေပေါ်ချွတ်ဗဟိုပြုအစိတ်အပိုင်းများဆုံးများအတွက် ဗဟိုပြု. function ကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကာကွယ်ပေးသည်
အလွန်အမင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောသွင်းရရှိအရှင်, အစိတ်အပိုင်းများကိုနှင့်သွင်း pusher အကြား။
Damper အမျိုးအစားတိပ် Cutter ယူနစ်
2.5 မီလီမီတာလေဖြတ် (အားလုံးအတွက်5မီလီမီတာ) ၏ damper နှင့်အတူပေးအပ်အဆိုပါတိပ်ခွေခုတ်သည့်ဖြစ်နိုင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုလျော့ချ
စံ Feature ကိုအဖြစ်မြေတပြင်လုံးဧရိယာကိုယ်ပိုင်ဆုံးမခြင်းရာထူးအမည်
တည်ငြိမ်များအတွက်အကောင်းဆုံး positional ဆုံးမခြင်းဖြစ်စေခြင်းငှါသွင်းအနေအထားမှာနှစ်ခုတွင်းနှစ်ဦးစလုံးကိုအသိအမှတ်ပြု
ဒါဆို insertion ။
ပိုမိုမြင့်မားသွင်းမှုနှုန်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ positioning ကို (XY, θနှင့်ဒဗလျူ), ။
Panasonic က INSERT စက်, Panasonic က INSERT စက်အစိတ်အပိုင်းများ, Panasonic ကနေရာထားရှိစက်, Panasonic ကနေရာထားရှိစက်အစိတ်အပိုင်းများ, Panasonic ကကြှေးမှေး & ကြှေးမှေးအစိတ်အပိုင်းများ, ကြှေးမှေးပုံဖမ်းတွန်းလှည်း, Smt Cutter စသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, အောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်မျှော်လင့်ကျေးဇူးပြုပြီး သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု!
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : Panasonic က INSERT စက်
Pansonic radial INSERT စက် RH3 အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic ကခဲအစိတ်အပိုင်း INSERT စက် RH5 အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က radial စိတျအပိုငျး INSERT စက် RHS2B Lead အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic ကခဲအစိတ်အပိုင်း INSERT စက် RHS အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic ကခဲအစိတ်အပိုင်း INSERT စက် RL131 အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က radial စိတျအပိုငျး INSERT စက် RL132 Lead အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
104131002202 Panasonic AI ကိုဖြတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
X01A36001 Panasonic AI TIMUNG ခါးပတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic ကခဲအစိတ်အပိုင်း INSERT စက် စိတျအပိုငျး INSERT စက်ကိုပို့ဆောငျ Panasonic က INSERT စက် AV131 Panasonic ကစိတျအပိုငျး INSERT စက် Panasonic ကလမ်းခွဲအစိတ်အပိုင်းများ Panasonic က INSERT စက်အစိတ်အပိုင်းများ AVK2 စိတျအပိုငျး INSERT စက် Panasonic က CM / NPM အစိတ်အပိုင်းများ